Ukukhiqizwa Kwe-Hi-Tech Technology Nemishini Yokuhlola
Bezinhlamvu Production Line
Amakhoyili Wokukhiqiza Umugqa
Ukuqapha kwamaphutha amakhoyili
Auto-Welding Tube futhi Plate
I-SPL ibilokhu ikhiqiza ukushintshana kokushisa iminyaka engama-20. Sinekhono lokucwaninga nokuthuthuka ngaphakathi, kanye nezinga lemboni ethuthukile ekucubunguleni, ekwelapheni ukushisa, ekusetshenzisweni kwemishini, ekuvivinyweni ngokomzimba nangokwamakhemikhali, amakhono wokulawula ikhwalithi.
Kuqedile Ukuhlolwa Kwemikhiqizo
Sizinikezele ukwakha amabhizinisi ekilasi lokuqala, senze imikhiqizo esezingeni lokuqala. I-CTI (i-Cooling Technology Institute) evela e-USA iqinisekisa ama-Cooling Towers minyaka yonke, ukusebenza komkhiqizo wethu kanye ne-Quality Service kusenza sibe ngabakhiqizi abahamba phambili eChina.
Iphrojekthi yokuqala yokupholisa i-evaporative yaseChina e-CNOOC.
Iphrojekthi yesitshalo se-China yokuqala yokutholwa kwe-sulphur dioxide eWest Mining.
Iphrojekthi yesitshalo se-China sokuqala se-Ethyl acetate eXinfu Bio.
• I-Aluminium engama-55 %- Inzuzo: Ukumelana nokushisa, impilo ende.
• I-Zinc engu-43.4% - Inzuzo: Ukumelana namabala.
• I-1.6% Silicon — Inzuzo: Ukumelana nokushisa.
ISuper Galum yigama lomkhiqizo lishidi lensimbi eliboshwe ngama-55% aluminium-zinc. ISuper Galum imelana nokushisa nokugqwala kakhulu, okuhlanganisa izakhiwo ze-aluminium ezinikezela ukuqina okukhuphukile, ukumelana nokushisa okuhle kakhulu, ukwakheka, kanye nalokho kwe-zinc okunikeza ukumelana nokushisa okuphezulu nokuvikelwa kokugqwala okuhle kakhulu. ISuper Galum inamandla amelana nokugqwala okuphindwe kathathu noma kasithupha kunensimbi yensimbi ejwayelekile ebiza izindleko.
Amakhoyili we-SPL's condensing coil akhiqizwa kusuka kushubhu yensimbi esezingeni eliphakeme ngokulandela izinqubo ezinzima kakhulu zokulawula ikhwalithi. Isifunda ngasinye siyahlolwa ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu yempahla.
Ukuvikela ikhoyili ekulweni nokugqwala, amakhoyili afakwa kufreyimu yensimbi esindayo bese kuthi inhlangano yonke icwiliswe ku-zinc encibilikisiwe (i-hot-dip galvanized) ethempelini lika-427oC, amashubhu afakwa lapho kugeleza khona uketshezi ukuhlinzeka okuhle amanzi oketshezi.
Amakhabethe we-BTC asebenzisa i-dichromat bolt ukuxhuma, i-inoxidability iphelele kakhulu kunamabhawodi avamile, okwamanje iqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwe-cooler isikhathi eside.
Umlomo wombhobho wokufafaza okhethekile onelungelo lobunikazi we-SPL uhlala ungenamanzi ngenkathi unikezela nokusatshalaliswa kwamanzi okungaguquguquki kokupholisa okuthembekile, okungenamazinga okuhwamuka ngaphansi kwazo zonke izimo zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, imibhobho ifakwa emapayipini okusabalalisa amanzi angenakho ukugqwala futhi anezindwangu zokuvala izintambo.
Ngokubambisana, lezi zinto zihlangana ukuhlinzeka ukumbozwa kwamakhoyili okungalingani nokuvinjelwa kwesikali, okubenza babe uhlelo oluhle kakhulu lokusabalalisa amanzi olungonakalisi, nolunakekelwayo.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Siemens drive motor, ngokuhamba okukhulu kwesisindo nomsindo ophansi. Isebenzisa uphawu lokuvinjelwa olungavinjelwe okungaphezulu kokuqondisa, ukuvuza mahhala nokuphila okude.
I-elektroni yokuhlanza amandla ihlinzeka ngama-98% ukusebenza okuthe xaxa ngaphezulu kokuvinjelwa kwesikali samanzi futhi ngaphezulu kwama-95% kukhulise inzalo nokususwa kwe-algae kubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu be-elekthronikhi. Idizayinelwe ikakhulukazi imibhoshongo evaliwe yokupholisa amaluphu nama-condensers okhuphukayo asetshenziswa ngamandla aphansi.
Uhlobo lokugoqa lwezinyosi lwe-PVC olunelungelo lobunikazi
SPL®ukugcwalisa ukwakheka okusetshenziswe emigqeni ye-S lines evaporative condenser kanye nokupholisa umbhoshongo kuklanyelwe ngokukhethekile ukudala ukuxubana okuxakile komoya namanzi okudlulisa ukushisa okuphakeme. Izeluleko ezikhethekile zokuhambisa amanzi zivumela ukulayishwa okuphezulu kwamanzi ngaphandle kokwehla kwengcindezi ngokweqile. Ukugcwaliswa kwakhiwe nge-inert polyvinyl chloride, (PVC). Ngeke ibole noma ibole futhi yakhelwe ukumelana namazinga okushisa amanzi angama-54.4ºC. Ngenxa yengxenye eyingqayizivele yokunqamula uju lapho amashidi anemicibisholo ahlanganiswe ndawonye, ​​kanye nokwesekwa okuphansi kwesigaba sokugcwalisa, ubuqotho besakhiwo bokugcwaliswa buthuthukiswa kakhulu, okwenza ukugcwaliswa kusetshenziswe njengeplatifomu yokusebenza. Ukugcwaliswa okukhethelwe i-Condenser ne-Cooling Tower kunezimpawu ezinhle kakhulu zokumelana nomlilo.
I-Patent Detachable Drift Eliminator
Isikhiphi sokukhishwa se-SPL esikhiphekayo senziwe nge-polyvinyl chloride (PVC) eklanywe ngokukhethekile, i-elimator enelungelo lobunikazi ihambisana ne-AS / NZS 3666.1: 20116 ngokulahleka okuphezulu kwe-0.001%.
Ama-elimiminators aklanyelwe ukwenza kube lula ukugcinwa okwenza kube lula ukuwahlanza.
I-Slope Basin ne-Cleanout elula
Ngalawa ma-pass louver uhlelo,amaconsi amanzi athathwa ephasendeni elingaphakathi elixegayo, kunciphisa izinkinga zokuphuma. Idizayini eyingqayizivele ye-lPL ye-lPL yayo yonke imigqa ye-SPL's N ivala ngokuphelele indawo yokugezela. Ukukhanya kwelanga okuqondile kuvinjelwe emanzini ngaphakathi kukondenisi nokupholisa umbhoshongo, ngaleyo ndlela kunciphise amandla okwakhiwa kwe-algae. Izindleko zokulungiswa kwamanzi nokugcinwa kwazo zincishiswe kakhulu. Ngenkathi iqukethe ngempumelelo amanzi aphindaphindayo nokuvimba ukukhanya kwelanga, ukwakheka kwe-louver kunokwehla kwengcindezi ephansi. Ukwehla kwengcindezi okuphansi kuphumela ekusetshenzisweni kwamandla kagesi okuphansi, okunciphisa izindleko zokusebenza kombhoshongo wokupholisa.
Ikhoyili Elliptical Ethuthukile
Imikhiqizo ye-SPL Series yenzelwe ukuthi ithunyelwe ngefomu lekhithi elifanelana neziqukathi.
I-OEM ne-ODM iyamukeleka